I-Aarya Khasti Apartments - I-Airbnb
I-Aarya Khasti Apartments
Igumbi lakho lokulala e indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo sinombuki zindwendwe onguSudeep
Igumbi lokulala elinekhitshi kunye negumbi lokuhlambela ngaphakathi nje kwemizuzu emi-2 yokuhamba ukusuka eBoudhanath Stupa. Igumbi lokulala kunye nekhitshi lihlukaniswe kwaye i-mini terrace iyafumaneka. Ngokuqhelekileyo zilungiselelwe abantu aba-2, iibhedi ezongezelelweyo zingongezwa ukuze zihlalise abantu abaninzi ngokunyuka okuncinci kwexabiso. Ikhitshi langoku elinezixhobo zasekhitshini kunye ne-electronics, itafile yokutyela kunye negumbi lokulala eline-TV kunye nesofa encinci zonke zibandakanyiwe.
Igumbi le-suite ligumbi elikhulu elahlulwe ngamagumbi amabini alinganayo (igumbi lokulala kunye nekhitshi) kunye negumbi lokuhlambela elinye. Kukho i-mini terrace ngaphandle kwegumbi. Ngenkxalabo yabucala, amagumbi abekwe kumgangatho wesithathu wesakhiwo. Eyona ndawo ingcono kukuba ibekwe kwindawo yokuhlala yale ndawo. Ke inoxolo njengoko injalo ayifumani sihlwele sikhulu kunye neemoto ezinkulu.
Ubumelwane ilele kwindawo yaseBoudhanath apho iBoudhanath Stupa eyaziwayo, enye ye-UNESCO World Heritage Treasure, ikhona. Phantse nje i-2 mins uhamba ukusuka kwi-stupa, ihotele yethu yakhiwe kwindawo enoxolo kwaye i-Boudha Stupa ayilali kude. Le ndawo yakhethwa ngabanini-ndawo ukuze iindwendwe zibe nendawo yazo enoxolo ngaphandle kokuhamba imigama emide ukuya kwiindawo ezikude.
Mna, ngokwam, ndiya kufumaneka kwipropati kwaye ndiya kunceda iindwendwe ngayo yonke indlela endinokuyenza. Ndiyayihlonipha imfihlo yabo kodwa ukuba iindwendwe zam zidinga umntu wokuthetha nam ndiza kufumaneka ngokulula.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kathmandu